Kursigii uu Ka Geeriyoodey Gabiyoow oo La isku Feeray
Loxos iyo Jawle oo isku feeray InterContinential Hotel
Maanta (Dec 19, 2003) ayaa dagaal gacan ka hadal ah ku dhexmarey Intercontinential Hotel Axmed shiekh Mashruuc Loxos ah guddoomiya KMG ee SPM/SRRC iyo Xiirey Jawle oo ciidanka ilaaliya Maxamed Qanyare Afrax ka dib markii loo diidey Axmed Mashruuc in uu fariisto kursiga SPM/SRRC oo wali uu Diidan wiilka uu dhaley marxuum Aden Gabyoow ee Cabdirashiid Aden Cabdullaahi Nuur oo isna wali ku doodaya in uu dhaxal u helay kursiga Aabihii Marxuum Gabyoow.
Geeridii marxuumka ka dib ayaa wareer iyo buuq badani ka dhashay oo beesha absame go'aamin kari wayeen kusigaasi Guddoomiye nimda, inkastoo shaley ay u saxiixeen guddiga fulinta iyo odoyaasha beesha absame in uu guddoomiye KMG sii Noqdo Muddane Axmed Sheekh Loxos, walow uu ku qancin cabdirashiid Aden Gabyoow .
Dagaalka noocan ayaa hogaamiyayaasha siyaasada ku xaliyeen in aysan labaduba soo fariisanin kursiga Guddoomiyaha SPM/SRRC iyagoo ayan la soconin Odayaasha beesha iyo Guddiga IGAD.
Cabdirashiid Aden ayaa ku soo horeeyey qolka shirka waana loo diidey kadibna wuu iska tagey
dagaalka gacan ka hadalka ayaa sababey markii loo diiday ayaa qola xoog looga soo saarey isagoo aflagaadeynaya Qanyare ,ka dib Axmed Loxos Yaa isku dayey garuun uu sitey in uu Qanyare madaxa kaga dhufto ,waxaa gacanta kaga leexiyey Xiirey oo albaabka kolhore ay ku wada dagaaleen axmed Loxos ka dib gacan ayaa la isku qaadey ,booliska ayaa yimid oo u kaxeeyey saldhiga booliska.
Agaagarka hotel iyo gudahiisa ayaa la soo dhoobey booliska kenya oo isugu jira ku dhar cad iyo kuwa dariiska qaba, baaritaan kadib waxaa ay ogaadeen in dagaal meel fog uusan jirin ,kolkii ay baxeen ayaa waxa duulaan soo qaadey labo nin iyo gabar oo ka socda Axmed looxos oo waqtiagaa ku xirnaa saldhiga booliiska
Cabdi iyo Geele, iyo jawaahir,gabdhii ayaa aflagaado cod dheer iyo hanjabaad ku sameeyey hotelka gudahiisa iyo banaankiisa Maxamed qanyare oo dagaalka u bedelay Murursade iyo Ogaadeen, nasiib wanaag buuqa kolkii la mawqley ayaa si aayar ah boliis u qabtey una ka xeeyey saldhiga. laba yaqaan goorta la soo deynayo iyo in maxkamamad la gayn doono.
Hogaamiyayaasha Shirka :-dawlad waa in aan dhisnaa ama ka tag.............
Hogaamiyayaasha soomaalida ee ku sugan madasha shirka ayaa soo saarey qoraalka ku kooban shirkii maalmaha ka socdey Intercontinential Hotel oo ku yaala magaalda nairobi.
Qoraal ayaa ka tarjumaya Fikradaha hogaamiyayasha siyaasada soomaalida ee ku sugan madasha shirka iyagoo ka shirka maalmahan looga hadlayey qoddobo dhawr ah oo ku saabsan arrimaha shirka Nabada soomaalida ee haatan ka socda Kenya.
qoraalkan ayaa waxaa kaloo ka hadlayaa taariihda shirka iyo marxaladii kala duwaa ee uu soo marey ,wajiyadii 1-aad iyo labaad ee shirka iyo caqabadii laga soo gudbay.
qoraalka ayaa qeexay haddii kulanada la qaban waayey in ay diyaar u yihiin in la dhiso Dawlad ama shirka lagu kala tago.
Qoraalka hogaamiyayasha oo rasmi ah waxa uu u qoran yahay sidan.
Somali National Reconciliation Conference Shirka Dib U Heshisiinta Soomaaliyeed
Guddiga Hoggaamiyeyaasha Soomaaliyeed
Maanta oo ay taariikhdu tahay 19kii Disember 2003, waxaa magaalada Nairobi shir degdeg ah isugu yimidGuddiga Hoggaamiyeyaasha (Leaders Committee) ee Shirka Dib-u-heshiisiinta Soomaaliyeed ee ka socda dalka Kenya kuwaasoo ah Saxiixayaashii Heshiiskii Joojinta Colaadaha ee lagu saxiixay magaalada Eldoret 27kii Oktoobar 2002 kaasoo ay soo dhaweeyeen Golaha Amniga ee Ururka Qarammada Midoobay, Ururka Midowga Afrika iyo Midowga Yurub.
Dood dheer kadib, iyadoo la tixgeliyey muddada dheer ee Shirka Dib-u-heshiisiintu socday iyo xaaladda adag ee ummadda Soomaaliyeed ku sugan tahay gudaha iyo dibeddaba; Guddiga Hoggaamiyeyaashu waxay guddoonsadeen arrimaha soo socda:
Inaan sinna loo oggolaan karin in tirada Hoggaamiyeyaasha (Leaders Committee) laga badiyo 24kii Saxiixay Heshiiskii Joojinta Colaadaha ee Eldoret. Waxaa tiradaas lagu soo kordhin karaa oo keliya Cabdiqaasim Salaad Xasan oo ahaa Madaxweynihii DKMG ah ee waqtigeedii dhammaaday. Muddada dheer oo annu dalka Kenya joognay waxay ahayd in aannu Dowlad Qaran oo loo dhan yahay ku dhisno halkaan ee ma ahayn in la abuuro ururro siyaasadeed oo cusub (creation of new factions). Waxay taasi ka soo horjeeddaa nidaamkii uu shirku ku soo socday.
Haddii aannu nahay Guddiga Hoggaamiyeyaasha Shirka, waxaannu si weyn u soo dhaweyneynaa talada "Retreat-ka" oo ay soo jeedisay Beesha Caalamka, taasoo loola jeeday wadatashi gaar ah oo ay yeeshaan Guddiga Hoggaamiyeyaashu si laysugu soo dhaweeyo kala fogaanshaha dhexdooda ah. Hase yeeshee, waxaanaan marnaba oggolaan doonin in Shirka "Retreat-ka" laysugu keeno tiro hoggaamiyeyaal siyaasadeed ah oo ka badan 24kii Saxiixe iyo Cabdiqaasim.
Kadib markii la tixgeliyey talooyinkii IGAD iyo Beesha Caalamka, waxaa Shirka Dib-u-heshiisiinta dib loo dhigay muddo 4 jeer ah, taasoo lagu doonayey in Shirka dib loogu soo celiyo 4tii Hoggaamiye Siyaasadeed ee Saxiixayaasha ka midka ahaa oo ka baxay Shirka. Haddaba, haddii aannu nahay Guddiga Hoggaamiyeyaasha Soomaaliyeed ee Shirka, waxaanaan oggolaan doonin in mar kale Shirka dib loo dhigo, taasoo khatar gelin karta Shirka, keenina karta inuu burburo oo lagu kala tago.
Iyadoo la tixgelinaayo muddada dheer ee uu shirku socday, kharajka faraha badan ee Beesha Caalamku ku bixisay iyo baahida weyn ee ummadda Soomaaliyeed u qabto Dawlad Qaran, waxaa la guddoonsaday, haddii ragga Shirka ka baxay dib ugu soo noqon waayaan goor habboon, in inta badan ee weli ku sugan Shirka iyo wufuudooda ay dhisaan Dawlad Qaran oo loo wada dhan yahay.
Waxaannu si xushmad leh uga codsaneynaa dalalka IGAD iyo Beesha Caalamka inay Dawladda dhismi doonta aqoonsadaan una fidiyaan taageero wax ku ool ah, ilaa ay Dawladdaasi cagaheeda isku taageyso.
Ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto, haddii aannu nahay Guddiga Hoggaamiyeyaasha Soomaaliyeed, waxaa naga go�an oo inagu ballan ah in aannu wax kasta ka hormarinno sidii loo soo celin lahaa Qarannimadii, karaamadii iyo jiritaankii ummadda Soomaaliyeed.
Waxaannu, si aan la soo koobi karin, ka mahadcelineynaa taageeradii iyo kaalmadii lama illoobaanka ahaa oo ay noo fidiyeen Beesha Caalamka iyo dalalka IGAD muddadii dheereyd ee uu Shirkani socday.
(Waxaa saxiixay Guddiga Hoggaamiyeyaasha)
MAXAY JARAA"IDKJA CAALAMKU KA QOREEN SOOMAALIDA